Semalt: Mampiasa angon-droa voalamina kalitao mba hahazoana fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao
Sendra nandia efitra niely koa ianao mba hitady kiraro kiraro? Tsy mifidy fa tsy mora izany. Io ideolojia io ihany no mihatra amin'ny tranokala.
Ny fitadiavana vaovao amin'ny Internet dia tena mora sy sarotra be, ary eto no antony. Raha manome ny tranonkalanao amin'ny Semalt ianao, dia tsy isalasalana fa hivoatra eo amboniny izany. Izany dia satria haintsika ny mametraka endri-javatra sy lahatsoratra ary sary mety. Tahaka ny mpanamboatra, dia nandany taona niasa amin'ireo fitaovana ilain'ny tranokalanao izahay ary nahafantatra ny fomba handrarana ny tranokalanao hanatratra ireo valiny mahafinaritra ireo.
Izany no antony tokony hisoratra anarana amin'ny tranokala rehetra miaraka amin'ny Semalt, fa satria tsy azo atao izany, dia apetrakay ny mpanjifa mampanantena tranonkala toa ny anao. Amin'ny maha matihanina anay, manana ny fitaovana sy talenta hanamboarana ny tranokalanao ianao dia ho hita maso foana rehefa karohina ny teny fanalahidy nefa ampy an'izany.
Inona ny angon-drakitra voalamina kalitao?
Ireo no fandaminana ny zavatra ao amin'ny tranokala iray araka ny tokony ho izy. Manampy ny tranokalanao i Semalt amin'ny fametrahana ireo zavatra mety amin'ny toerana mety. Izany dia mamela ny mpitsidika sy ny mpikaroka mpikaroka mivezivezy malalaka. Ity endri-javatra ity dia mety ho singa farany tsy hita rehefa manandrana mahazo ny tranonkalanao. Saingy na maninona fa avo be ny teny fanalahidy SEO anao, tsy ho mora ny mahita raha tsy voalamina tsara ny tranokalanao.
Nandritra ny taona maro izay, Semalt dia niara-niasa tamin'ny mpanjifa sy tranonkala marobe. Nandritra ireo taona ireo dia nanjary fahita ny tranokala mampiasa tranokala SEO mahavariana. Saingy tsy mahazo fifamoivoizana na tsindry fotsiny ireo tranonkala ireo, izay lasa olana goavana ho an'ny tompony. Rehefa esorinao ny lokon'ny tranokala, ny endri-tsoratra, ny sary miorim-paka, ny sisa tavela aminao.
Ny sain'olombelona dia mitady fifandanjana sy modely ary filaharana amin'ny fianarana na fahatakarana. Ny dikan'izany dia ny mahaliana antsika amin'ny andiany 1,2,4,4 rehefa mianatra ny isa izahay fa ny fanehoana miparitaka ireo isa toa ny 10,000, 100, 3, 6. Ny tiantsika dia maniry ny hahita zavatra izay antenaina ho.
Ny mpampiasa amin'ny Internet dia aleony manomboka mamaky lahatsoratra na ny votoatin'ny tranonkalanao avy amin'ny fampahalalana kely sy be pitsiny indrindra. Amin'ny ankapobeny, raha manomboka amin'ny be pitsiny ianao, dia lasa liana ny mpamaky ary mifindra any amin'ny tranokala tsara kokoa.
Fantatrao fa ny politikan'ny Google dia natao hifanaraka amin'ireo mpampiasa azy aloha. Midika izany fa ny tranokalanao dia manintona kokoa ny mpamaky, ny fahalianana ho tonga amin'ny milina fikarohana an'i Google. Ny algorithm Google dia manangona fampahalalana avy amin'ny fikarohana ary mampiasa izany data izany ho an'ny tranokalanao. Ny fomba fiasa dia ny hoe raha mahita ny tranokalanao, ny SERP na ny motanao fikarohana dia manara-maso ny halavan'ny mpampiasa azy ireo ao amin'ilay tranokala. Ny tranonkala voalamina tsara dia mahatonga ny mpitsidika hitoetra ela kokoa amin'ilay toerana izay mahatonga tranokala tsy dia voalamina mahatonga ny mpamaky miala.
Ny lafin-javatra hafa, toy ny tahan'ny lelabato dia misy ihany koa rehefa mandinika ny firafitry ny tranokala. Ny firafitry ny tranokala tsara dia mety hampihena ny tahan'ny bouncing, ary ny fotoana honenan'ny mpamaky. Rehefa atambatra ireo lafin-javatra roa ireo dia mahazo toerana ny laharan'ny tranonkalanao.
Ny firafitry ny tranokala tsara dia manome ny tranokalanao amin'ny rohy momba ny tranokala tsara kokoa.
Ireo rohy mankany amin'ny tranokala dia ny endrika lisitra ao amin'ny SERP izay mampiseho ny pejy voalohany amin'ny tranokalanao ary misy rohy anatiny. Ireo tranonkala rohy ireo dia volamena raha resaka SEO optimization. Ataon'izy ireo ho mora vakiana ny mpampiasa anao. Io dia manondro ny mpamaky ny fampahalalana mifandraika indrindra amin'ny tranokalanao, izay mampitombo ny lao marikao ary atokisan'ny mpampiasa ny votoatinao. Ireo rehetra ireo dia manampy ny tranonkalanao hanana toerana tsara kokoa ao amin'ny SERP.
Ahoana ny fomba ahazoanao rohy ireo tranonkala ireo?
Tsy afaka mandeha any amin'ny console fikarohana Google ianao ary hameno endrika iray hahazoana fahazoana rohy tranonkala. Raha tsorina dia tsy afaka mangataka rohy tranokala ianao. Ireo rohy ireo dia natolotry ny algorithm an'ny Google rehefa nanjary ampy tsara ny firafitry ny tranokalanao. Ary raha tsy misy ireo rohy ao amin'ilay tranokala dia mety hihena ny tranokalanao, ny CTR avo lenta ary ny fiovam-po mitombo.
Ny milina fikarohana dia mila fananganana tranokala tsara kokoa noho ny fihodinana tsara kokoa.
Ireo mpihetsiketsika tranonkala toa an'i Googlebot dia mandady tranokala miankina amin'ny bangan'izy ireo. Ny tranokala voalamina tsara dia manamora mora kokoa sy mandroso haingana kokoa ary hahita ny teny napetrakao. Ny tanjon'ity WebCrawler dia ny hanondro ireo votoatiny hamerenana ny famakafakana ho valin'ny fikarohana.
Tokony ho fantatrao fa ny votoatin'ny tranonkalanao dia tsy fantatry ny Google avy eo. Ireo mpisoloky ireo dia tsy vao nahita ny vokatra nofantenany hanehoana rehefa karohina ny teny iray. Google mihitsy no niresaka fa mety tsy nahita pejy na URL vitsivitsy izy ireo androany. Izany dia satria tsy hitan'ny WebCrawler Google izy ireo. Mba hiantohana ny tranokalanao sy ny pejin-tranonkalanao dia tsy mijaly amin'io sakana io, tokony ataonao mora kokoa ny fidirana amin'ny tranokalanao sy handroso ary hanondroana ny WebCrawler's.
Ny firafitry ny tranokala tsara dia fototry ny fanatsarana ny SEO
Amin'ny farany, tsara ny hatsaran'ny SEO anao ary matetika no voafaritry ny firafitry ny tranokalanao. Maro ny matihanina no hiady fa raha tsy misy tranokala tsara, dia tsy hahomby na oviana na oviana ny SEO. Ny firafitry ny tranokala no fototry ny SEO anao, ary toy ny misy trano rehetra, ny fototra dia tsy maintsy ho mafy orina. Ny fototra malemy na tsy voaorina fotsiny dia midika hoe ho rava ny tranobanao. Amin'ny farany, dia fotoana voafetra ihany io. Toy izany koa, ny tranokalanao dia tsy hahomby amin'ny farany raha tsy misy ny firafitra mety.
Ireto ny dingana hamoronana ny firafitry ny tranokala mety
Mamolavola hierarchy alohan'ny handrafosanao ny tranokalanao
Raha manomboka tranonkala vaovao ianao dia afaka manomana izay endrika horaisin'ny tranokala manomboka eo am-piandohana. Na alohan'ny handrosoanao hamorona pejy ao amin'ny CMS aza dia tokony hanomana drafitra izay tianao hoentin'ny tranokala ianao. Azonao atao ny manao ny drafitra amin'ny lapam-paritra, whiteboard, na amin'ny présignage amin'ny teny.
Ny fampahalalana anao dia tokony hanana ambaratongam-pahefana. Ny fampahalalana aseho dia tokony hikoriana amin'ny fomba tsy misy dikany. Rehefa vita ianao, ity hierarchie ity dia ho lasa navigateur sy URL firafinao, ka ny dingana lehibe na manan-danja kasainao hatao dia misy fiantraikany amin'ny ataonao eto.
Misy endri-javatra vitsivitsy hierarchy tokony hotadidinao.
Ataovy lojika ny tanjonao hierarchy. Aza manandrana manemotra na hanenjana ny dingana.
Tazano ny isan'ny sokajy lehibe eo anelanelan'ny roa sy fito. Raha tsy tranonkala miantsena eCommerce ianao dia tsy mila manana sokajy maro loatra. Izany dia mahatonga ny tranonkalanao koa, "sahirana."
Manandrama mandanjalanja ny isan'ireo sokajy ao anatin'ny sokajy tsirairay. Na dia tsy voatery ho voatery aza izany, dia tokony hanandrana sy hahavita izany ny tranokala web. Ny sokajy voalohany dia tsy tokony misy sokajy folo, raha ny dimy kosa manana dimy. Mahatonga tsy ahitam-pahaizana ilay tranokala.
Ny firafitry ny URL anao dia tsy maintsy manaraka ny hierarchy Navigation anao.
Ny rafitra iray hafa ilaina dia ny firafitry ny URL anao. Raha nahavita ny dingana voalohany ianao, dia tsy tokony ho olana izany. Ny URLo dia hitondra ny tranonkala lehibe, sokajy iray lehibe, alohan'ny subcategory. Tokony ho toy ny www.Semalt.net/SEO/UsingQualityStructureDataToGetMoreClicks. Ity rohy ity dia mandamina ny fampahalalana naseho araka ny ambaratongany.
Ny fahazoan-dàlana amin'ny tranokalanao dia tokony amin'ny endrika CSS na HTML.
Rehefa mamorona tranonkala ianao, dia tazano tsotra fotsiny ny fanaovana kaody. Ny fampiasana fiteny fanamafisana dia manasarotra ny WebCrawler's hanarona ny tranokalanao.
Mampiasà firafitra mivaingana lalina.
Rehefa mamantatra izay alehany ianao dia mitandrema mba tsy handevina ireo faritra tena ilaina amin'ny tranokalaninao ao anaty hierarchy anao, ny tranokala maina dia mety hiasa tsara kokoa ho an'ny mpihaza tranonkala sy ny mpamaky.
Manamboara rafitra fifandraisana anatiny
Izahay dia nahafantatra antony telo izay maha-zava-dehibe an'io toetra io amin'ny firafitry ny tranokalanao. Ity misy lisitry ny antony maha-ilaina ny rohy anatiny:
Avelany hivezivezy ny tranokala ireo mpampiasa
Manampy amin'ny fametrahana ny ambaratongam-baovao ao amin'ny tranokala izy ireo.
Manampy izy ireo hampiely ny fahefana laharana manerana ny tranokala, hanome toerana anao tsara kokoa.
Ny tsirairay amin'ireo dia mandray anjara amin'ny famoronana tranokala voapetraka tsara.
Ny fifandraisana anatiny dia tsy toy ny siansa rocket. Midika fotsiny izany fa mampifandray ireo atiny na pejy iray amin'ny tranokalanao amin'ny manaraka. Ity fampifandraisana anatiny ity dia tokony hitarika ny mpamaky anao amin'ireo pejy sokajy sokajy sy ny pejy sokajy sokajy.
Ny rohy anatiny dia milaza amin'ireo milina fikarohana izay maha-zava-dehibe ny tranonkala sy ny fomba hahatongavana any.